DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA SAMSUNG R525 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Otutu laptọọpụ nwere ọtụtụ ngwaike. Maka nkwekọrịta ziri ezi n'etiti components na sistemụ arụmọrụ, ọ dị mkpa ka ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa, na n'isiokwu taa, anyị ga-eme ka ị mara ụzọ maka inweta software a maka Samsung R525.
Ndị ọkwọ ụgbọala maka Samsung R525
Usoro maka ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ anaghị adị iche na nke maka otu ngwaọrụ. E nwere anọ n'ime ha maka laptọọpụ ajụjụ. Anyị na-atụ aro na ị ga-akpachara anya na onye ọ bụla ma na-ahọrọ nke ga-adaba n'ọnọdụ gị.
Usoro 1: Ngwaahịa Nkwado Microsoft
Ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ IT na-enye ndụmọdụ ịmalite ịchọta ngwanrọ maka laptọọpụ arụmọrụ na ebe nrụọrụ weebụ nke onye na-emepụta ihe: na nke a, ngwanrọ na ngwanrọ na-emezurịrị. Anyị na-akwado nkwenye a, anyị ga-amalite site na itinye aka na saịtị ọrụ nke Samsung.
Gaa na ngwa akwadoro Samsung
Mepee weebụsaịtị na njikọ dị n'elu, chọta ihe dị n'elu nke ibe. "Nkwado" ma pịa ya.
N'ebe a, ị ga - eji search - banye na akara aha nke ụdị ihe - R525. O yikarịrị ka engine engine ahụ ga-enye ụfọdụ n'ime mgbanwe ndị kachasị ewu ewu na mpaghara a.
Maka mkpebi ikpe ziri ezi karị, ị ga-achọ itinye ederede kpọmkwem maka laptọọpụ gị. Enwere ike ịchọta ndekota n'ime akwụkwọ maka ngwaọrụ ahụ, ma chọpụta ya na mpempe akwụkwọ pụrụ iche na ala nke ngwaọrụ ahụ.
Gụkwuo: Chọpụta nọmba serial nke laptọọpụ
Mgbe ị na-aga na nkwado ngwaọrụ, chọta ihe ahụ "Nbudata na Nduzi" ma pịa ya.
Ugbu a, ọ dị anyị mkpa ịbanye na mpaghara ahụ "Downloads" - maka akwụkwọ mpịakọta a na ọnọdụ achọrọ. Akụkụ a nwere ndị ọkwọ ụgbọala maka akụkụ niile nke ngwaọrụ ahụ. Ewoo, enweghi ike ibudata ihe niile n'otu ugbo, ya mere ị ga-achọ ibudata ihe ọ bụla iche site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị. Layfhak - kachasị mma iji mepụta ndekọ ọhụrụ "Desktọpụ" ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị mfe ịnweta ebe ị chọrọ ibudata ọkwọ ụgbọala installers.
Ọ bụghị ihe niile dabara na ndepụta ahụ, wee pịa "Gosi ndị ọzọ" iji nweta mpaghara ndị ọzọ.
Tinye usoro software ọ bụla. Anyị na-akwado ịmalite na ndị dị egwu dịka ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwa netwọk na kaadị vidiyo.
Usoro a nwere ihe ndọba abụọ: nnukwu ọrụ na-akwụ ụgwọ na ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ.
Nzọụkwụ 2: Ntụkọta akpa nke atọ
Dị ka ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ laptọọpụ ndị ọzọ, Samsung na-ahapụ ikike ya maka imelite ngwanrọ na ngwaahịa. Lee, na nke anyị taa ọ bụ ihe efu - enweghị nkwado maka ụdị ihe nlereanya R525. Otú ọ dị, e nwere otu klas nke mmemme ndị yiri ihe a kpọtụrụ aha - ndị a bụ ndị a na-akpọ ọkwọ ụgbọala. Site na ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche, ngwọta dị otú ahụ dịgasị iche na ntụgharị na njirimara nwekwuo mmekọrịta. Otu n'ime ndị kachasị ọkaibe bụ Snappy Driver Installer.
Download nchịkọta ihe ntanetịime nchịkwa
Ngwa ahụ anaghị achọ nkwụnye - naanị kpochie Archive ahụ na ihe ndekọ ọ bụla dị na diski ike gị. Ị nwere ike ịme ihe omume ahụ site na iji faịlụ ejiri. Sdi.exe ma ọ bụ SDI-x64.exe - Ezubere nke a maka Windows 64-bit.
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ usoro ahụ maka oge mbụ, ọ ga-eme ka ị budata nchekwa data zuru ezu nke ndị ọkwọ ụgbọala, ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ netwọk, ma ọ bụ naanị ntinye maka ijikọta na nchekwa data. Anyị nwere oke nke nhọrọ nke atọ, n'ihi na pịa bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Mgbe nbudata ahụ zuru oke, Snappi Driver Installer na-achọpụta na ngwanrọ kọmputa ma na-enye gị ndepụta nke ọkwọ ụgbọala maka ya.
Lelee ihe ịchọrọ ịwụnye wee pịa bọtịnụ "Wụnye".
Ugbu a ọ ka na-eche - ngwa ahụ ga-eme ihe niile dị mkpa na ya.
Nhọrọ a bụ nnọọ ihe dị mfe, Otú ọ dị, usoro ihe omume algọridim adịghị eji ụzọ ziri ezi chọpụta ihe ụfọdụ - buru n'uche nuance a. Enwere uzo ozo nke na enweghi ihe di nma - i puru ichota ha n'isiokwu di iche.
Gụkwuo: Ngwaọrụ kachasị mma
Usoro 3: Ihe njirimara ihe
Ụzọ na-ewe oge, ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya iji nweta ndị ọkwọ ụgbọala bụ iji ID nke ngwaike, ya bụ, aha ngwanrọ pụrụ iche nke nke ọ bụla n'ime laptọọpụ dị na ajụjụ, iji chọọ NJ hardware. Ndị dere anyị emepụtala nduzi na nnata na iji ojiji nke njirimara na iji ghara ikwugharị, anyị na-enye njikọ maka ihe a.
Ihe omumu: Otu esi achọta ndi ozo site na iji ID
Usoro 4: Atụmatụ System
N'ikpeazụ, ụzọ ikpeazụ maka taa anaghị agụnye itinye usoro mmemme nke atọ ma ọ bụ gbanwee ihe ndị ọzọ. Ọbụna ị ga-emeghe ihe nchọgharị - naanị ịkpọ "Onye njikwa ngwaọrụ", pịa RMB na ngwa ndị dị mkpa ma họrọ nhọrọ na menu ndokwa "Ndị ọkwọ ụgbọala di elu".
A na-akọwa usoro a, yana ụzọ ndị ọzọ nke itinye aka na ya, n'isiokwu zuru ezu, nke ị nwere ike ịchọta site na ntinye aka n'okpuru.
Gụkwuo: Anyị na-emelite ndị ọkwọ ụgbọala site na ngwaọrụ.
Anyị akọwawo ụzọ anọ kachasị mfe iji nweta ndị ọkwọ ụgbọala. E nwekwara ndị ọzọ, dị ka ịnyefe faịlụ na ndekọ aka na ndekọ aka, mana nchịkwa dị otú ahụ enweghị nchebe ma nwee ike imebi iguzosi ike n'ezi ihe nke sistemụ arụmọrụ.